Soomaaliya oo loogu deeqay $7 milyan oo gargaar ah. - Awdinle Online
Soomaaliya oo loogu deeqay $7 milyan oo gargaar ah.
Dowladda Mareykanka ayaa Khamiista maanta ku dhawaaqay in ay siin doonto Soomaaliya $ 7 milyan oo doolar oo wax looga qabanayo Xanuunka dillaaga ah COVID-19.
“Dowladda Mareykanka waxa ay $ 7 milyan oo gargaar bani’aadamnimo iyo mid caafimaadba siineysaa Soomaaliya taas oo loogu talagalayka jawaabida COVID19,” ayaa lagu daabacay bogeeda internet-ka ee Wakaaladda Horumarinta Caalamiga ah ee Mareykanka ee (USAID) qaybteeda Soomaaliya.
Gargaarkan ayaa ugu horreyn lagu bixin doona taageero laxiriirta caafimaadka iyo sahayda lagu xoojinayo howgaladda biyaha iyo fayadhowrka,” ayay tiri USAID Soomaaliya.
Soomaaliya waxa ay xaqiijisay shan kiis oo COVID-19 ah illaa iyo hadda, oo aan wax dhimasho ahi ku jirin, iyo hal soo kabasho ah, sida ay muujinayaan warbino ay soo diyaariyeen Jaamacadda Johns Hopkins ee fadhigeedu yahay Mareykanka iyo wasaarada Caafimaad Soomaaliya.
Ra’iiul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo arbacadii Shir jaraa;id ku qabtay Xafiiskiisa Magaaladda Muqdisho ayaa sheegay in Dowladda Soomaaliya ay wada hadal kula jirto hay’adaha Caalamiga ah iyo ganacsatada Soomaaliyeed si qarashaad loogu helo ka hortaga Xanuunka Coronvirus.
Xogta Jaamacadda Johns Hopkins ayaa muujineysa in coronavirus uu hadda ku faafay 180 waddan tan iyo markii ugu horreysay ee uu ka soo bilowday Wuhan, Shiinaha bishii Desembar ee sanadkii la soo dhaafay.
Ku dhawaad ​​942,000 oo kiis ayaa laga soo sheegey adduunka oo dhan, iyadoo dhimashaduna ay ka badan tahay 47,500, iyo 202,000 oo soo kabasho ah, sida ku xusan xogta Jaamacadda Johns Hopkins ee fadhigeedu yahay Mareykanka.
Previous articleDhageyso:-Wasiirka Shaqada Somaliland oo ka jawaabtey hadal kasoo yeeray Dowladda Soomaaliya
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo ku baaqay in deg-deg loo joojiyo dirirta ka taagan galbeedka Kismaayo
Erdogan oo soo saaray Farriin ku socota dalal ay kamid tahay Somalia
Maxay yihiin Sharciyada uu Madaxweynaha Galmudug saxiixay?
DEG DEG:- Weerar kale oo ka dhacay Faransiiska
RW Rooble oo ku dhawaaqay qorsho lagula dagaalamayo Musuq maasuqa
Golaha Shacabka oo ansixiyay Sharci la horgeeyay
Somaliland oo qabatay Khamri & Dad ka Ganacsanayay
Somalia oo kaalinta 1aad ka gashay dalalka aan lagula xisaabtamin Dambiyada
Qarax lagu dilay mas’uul ka tirsan Maamulka Koonfur
Dowlad ku dhawaaqday inay Muwaadiniinteeda kala baxeyso Muqdisho